"1 Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe: 2 Enga anie ka ho tahaka ny tamin’ireny volana lasa ireny aho! Dia tahaka ilay tamin’ny andro niarovan’Andriamanitra ahy! 3 Fony mbola nazava teo ambonin’ny lohako ny jirony, ary ny fahazavany no nandehanako tao amin’ny maizina; 4 Eny, tahaka ny toetro fony aho mbola fararano, raha niseho teo ambonin’ny laiko ny fisakaizan’Andriamanitra; 5 Fony mbola tao amiko ny Tsitoha, Ary nanodidina ahy ny zanako; 6 Fony mbola nanasa ny tongotro tamin’ny rononomandry aho, ary ny vatolampy namoaka renirano diloilo teo amiko; 7 Raha niainga niakatra ho eo amin’ny vavahadin’ny tanàna aho ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana, 8 Dia nahita ahy ny zatovo ka niampirimpirina; Ary niainga ny fotsy volo, dia nijoro; 9 Nangina tsy niteny ny lehibe ka nitampim-bava; 10 Tsy sahy niteny ny mpanapaka, ary ny lelany niraikitra tamin’ny lanilaniny. 11 Izay sofina nandre dia nanao ahy hoe sambatra; Ary izay maso nahita dia vavolombelona ho ahy, 12 Satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kamboty izay tsy nanan-kamonjy. 13 Ny fisaoran’izay efa ho faty dia tonga tamiko; Ary ny fon’ny mpitondratena nampifaliko. 14 Nitafy fahamarinana aho, ka mba nitafy ahy kosa izy; Eny, tahaka ny lamba sy ny hamama ny rariny izay nananako. 15 Efa maso ho an’ny jamba aho ary tongotra ho an’ny mandringa. 16 Efa ray ho an’ny malahelo aho, ary ny adin’ny olona tsy fantatro aza nodinihiko. 17 Namaky ny nifin’ny ratsy fanahy aho Ka nandrombaka ny babo teo am-bavany; 18 Dia hoy izaho: Eo amin’ny akaniko ihany no hialako aina, ary hanamaro ny androko toy ny fasika aho. 19 Ny fakako ho azon’ny rano, ary ny ando hitoetra amin’ny sampako mandritra ny alina. 20 Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro, ary ny tsipikako hihahenjana eny an-tanako. 21 Nihaino ahy ny olona, dia niandry, ka nangina tamin’ny fanolorako saina izy. 22 Rehefa niteny aho, dia tsy mba namaly intsony izy; ary nitetevan’ny teniko izy. 23 Niandry ahy toy ny fiandry ny ranonorana izy ary nitanatana vava toy ny fiandry ny fara-orana. 24 Raha nisy nila ho ketraka, dia mbola niseho miramirana taminy ihany ny tarehiko, ary tsy nahamaloka ny fahazavan’ny tavako ireo. 25 Nifidy ny làlan-kalehany aho ka nipetraka ho lohany, Eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin’ny miaramila Sy toy ny mpampionona ny misaona aho." Joba 29:1-25
Efa voasedra mafy eto i Joba ka mandini-tena izy ankehitriny. Nahatsiaro ny fitahiana azy fahiny izy ka nitanisa izany.
Nahatsiaro ny fanambinan’Andriamanitra Joba (1-6). Niaiky fa tena narovan’Andriamanitra (2) na izy na ny ankohonany na ny fonenany (4). Ireo zananilahy rehetra dia faly nitoetra nanodidina azy (5) ary tena nilomano tao anaty harena izy mianakavy (6).
Nahatsiaro ny voninahiny fahiny Joba (7-10). Natahoran’ny tanora izy sady nohajain’ny antitra (8). Nampiaiky ny lahibe (9) ary nahay nampangina ny mpanapaka (10). Tena noderain’ny olona maro izy noho ny asa soa nataony (11-13).
Nahatsiaro ny fahatsaram-pitondrantenany Joba (14-20). Tena nandeha tamin’ny fahamarinana sy ny rariny izy (14) ary namonjy ireo sahirana sy ny vahiny (16).
Nahatsiaro ny fanantenan’ny olona azy izy (20-25). Nanantena azy araka izany ny olona maro ary namiratra izy (20). Tena nohenoin’ny olona izy (21) sady nandrandrainy tamin’ny zavatra maro (23). Nahay nampahery olona rahateo izy (25).
Hafatra: Aoka tsy ny hirifiry ateraky ny fizahan-toetra mahazo antsika ankehitriny no hanadinoantsika ny fitahiana marobe efa nataon’ny Tompo tamintsika. Tahaka ny nataony tamin’i Joba, Izy mahalala ny hevitra hiheverana antsika na dia tsy takatry ny saina ankehitriny aza.